Space lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Izao Rehetra Izao lasa tena akaiky izahay, fa ny olona rehetra dia afaka misafidy ny mandefa sambon ka mankanesa any milalao lalao toerana maimaim-poana amin'ny aterineto, izay manaitra fahafahana ho lasa mpivarotra eo amin'ny tontolo na ny jiolahy, izay mamely ny malemy fandrosoana. Andevo planeta azo nivadika ho zanatany sy manangona hetra avy amin'izy ireo, na ny fampiatoan'ady, ary ny anjara loharanon-karena toy ny mitovy. Safidy hafa Event – hisafo ny kintana sy ny vahiny handrava ny mahery setra, tsy mamela azy ireo mba hanafika anao nankinina toerana malalaka. Ianao Miandry hiady amin'ny gunfights. &Nbsp;
Aoka ankehitriny nofy ho lasa ny mpanamory sambon-danitra dia tsy toy ny malaza, ary nisy maro kokoa fahafahana, noho ny vola mety ho interstellar mpizaha tany, fa tsy hisy olona te-tara Lalao Space, vao mainka fa afaka milalao azy ireo maimaim-poana. Izany no tena mahafaly! Alohan'ny tsy manam-petra hanokatra lalina habakabaky ny lanitra feno kintana, ny dia ho any amin'ny tsy fantatra planeta, sivilizasiona fanafihana ny faran'izay tsotra na ara-barotra miaraka amin 'ny humanoids. Mifidiana miaramila na sambo entana sy hijery ny miafina rehetra vazan-majika ny tontolo izao voarindra.
Intergalactic ranomasina ady
Mitifitra firenena hafa
Fahatsiarovan'ny Space Invaders
Grippe Galaxy Attack
Misamboaravoara Toy ny Boss
Miaro ny tany
Mpanafika Spaceship Alien
Tompon 'ny Galaxy
Ady ho an'ny ny vahindanitra
Mpiambina ny Vondron-kintana
Mitahiry ny planeta
Ny fanavotana jetpack
Lalao Space tamin'ny Category:
Farany Space lalao
Elliott Avy amin'ny Tany: Hunter Meteor
Elliott avy amin'ny pilotan'ny kintana amin'ny tany
Biriky ny biriky
Mitsitsia avy amin'ny Aliens II
Shooter Space mahafinaritra
Vahoaka misintona olona
Fifaninanana Asteroid Nova One
Lalao Online Rehetra Space lalao
Lalao toerana ho an'ny nazoto mpanonofy
ny firenena fony fahagola no ahafantarantsika ny tao ny lanitra, miezaka ny hahatakatra izay ao ambadiky ny zava-nitranga jiro. Dia naka meteorites biby manidina ho an'ny velona na famantarana avy amin'Andriamanitra. Nandritra ny taonjato maro ny olombelona rembin'ny herisetra fihetseham-po vinavina – Misy ny fiainana amin'ny planeta hafa. Ary aoka isika efa imbetsaka no afaka mandeha any amin'ny toerana misokatra, tany amin'ny volana, handefa unmanned sambo ho any lavitra kintana mampiasa telescopes sy hijery ny lanitra, dia tsy nifindra amin'izany zavatra izany. Misy planeta onenana hafa afa-tsy – ho antsika dia mbola zava-miafina.
Topic fampandrosoana mavitrika ny siansa toerana mpanoratra tantara foronina sy ny screenwriters. Namorona izao tontolo izao izy ireo mponina mahery vaika sy mahafatifaty vahiny. Olona miatrika foana ny fanatrehan'ny tamin'ny tompon-tany tany ary hahatsapa ny fiantraikany. Mpanoratra mampiasa kosmitov nametraka fanandramana eo amin'ny olombelona, ​​ara-tsaina hanandevo azy, maka an-keriny ny toy ireny. Nefa ny sasany kosa naka ny sary mahay dia ho velona eo amintsika, miasa toy ny mpivarotra, toekarena, mpamily. Izany toe-javatra nanolotra ny sarimihetsika "olona any Black", araka izay olona maro no matoky kokoa ny fisian'ny vahiny eo anivontsika.
rehetra ny virtoaly sambo vonona ny fiaramanidina!
Mazava ho azy, ny lalao toerana no nanapa-kevitra ny hanolotra ny dikan-Star Trek. Tantara tsirairay dia manome be dia be ny fahafahana mba hihoatra ny planeta sy ny vahindanitra. Anisan'ny soso-kevitra ianao dia hahita:
Ho hihaona namana sy fahavalo, dia hanatanteraka ny iraka mba hampitombo ny varotra sy hameno ny tany foana. Space ady dia tsy vitsy, ary ny sambo dia fitaovana amin'ny basy ankehitriny hiady jiolahin-tsambo sy ny mpanafika izay te-handresy antsika. Ny iray amin'ireo asa dia ny handrava ny meteorites, izay tanteraka ao amin'ny banga. Na dia ny sambo mba hiarovana ny hery an-tsaha, dia mety simba fifandraisana matetika izany. Raha toa ka tsy manam-potoana mba hitifitra ny tainkintana, dia tsara kokoa ny tsy mampidi-doza fifandonana.
Aoka ianareo ho ny lehiben'ny mpiambina ny Cruiser izay mijery eny amin'ny lanitra namana mpiara-monina, mba hametaka ny fifandraisana ara-toekarena sy ny anjara teknolojia. Nirotsaka an-tsambo misy laboratoara izay mba hijery ny santionany ny vato sy ny rivotra. Toerana nandritra ny lalao an-tserasera eo amin'ny fanekeny, mpahay siansa, miaramila sy ny specialties. Fa ny asa nanirahana ny hahomby, dia tokony ho mahasoa ny manao ny fotoana.
Azonao atao ihany koa ny mahita ny tenany eo amin'ny andraikitry ny mahafatifaty vahiny, izay nandeha an-kafa tany mba hamonjy ny malalany. Ny fandrika ary ny fitsapana no miandry ny izay tsy vonona. Misy ny lojika tokony mba hitady vahaolana ho amin'ny asa manaraka.
, dia ho hitanao sy proteinina Arrow – Cosmonaut voalohany alika. Ianao angamba efa nahita azy ireo sariitatra maoderina, ary ankehitriny dia fotoana mba hanampy azy ireo hanatanteraka ny iraka tompon'andraikitra handrava meteorites. Anisan'ireo ny endri-tsoratra nahazatra anao, dia misy SpongeBob, Angry Birds, lilo sy Stitch, Super ombivavy. Fa mahery fo Super Marvel afaka hiakatra an-toerana tsy misy bala afomanga, ny niteraka tanana mba hampitsahatra ny vato sombina.
mahaliana momba habakabaka fikarohana
Ny finoana ny olona amin'ny toerana misokatra raha tsy misy spacesuit mivaingana ny olona, ​​nipoaka na ho faty avy hatrany tsy mety. Tratra tao amin'ny banga, ny tena manana 1-2 minitra ho tafavoaka velona – hiverina any amin'ny sambo. Ny tena loza ho an'ny olombelona – may sy decompression. Midika izany fa ny vatana haingana manomboka ho very ny hamandoana sy ny rivotra, izay tsy mifanaraka amin'ny fiainana. 30-60 segondra eny amin'ny toerana tsy hiteraka fahavoazana lehibe ho olona iray. Raha miteny izany, dia afaka miantehitra amin'ny imbetsaka nitarika fitsapana toy izany koa ny NASA.